Sihlalutya uLektu | Zonke iiReaders
Sele iveziwe Lektu, entsha iqonga lokuthengisa nge-ebook ngaphandle kwe-DRM. Ukusukela ekuqaleni bendilithanda inyathelo, ndicinga ukuba iprojekthi enje iyafuneka kwaye ndiyathemba ukuba izakuphumelela. Ndiyakuthanda ukubona iibhodi zokuhlela apho ndingumthengi kunye nabanye abaninzi endibalandelayo.
Ngokwesiqhelo kwaye kuthathelwa ingqalelo ukuba basandula ukuqalisa kwaye banendlela ende yokuhamba, ukubonakala kulungile. Bafezekisa oko bakuthembisileyo, Iincwadi ze-DRM zasimahla, amaxabiso afikelelekayo kunye neqonga ekulula ukulisebenzisa kubasebenzisi. Akukho nto inokuchaza ukuba ungathenga njani, iinkqubo kunye nolwazelelo olucacileyo nolucacileyo. Okwangoku phantse bonke abapapashi bagxile kuyo Inzululwazi yeFiction, Fantasy kunye neRorror njengoko bekulindelwe, kodwa ngokuqinisekileyo ekuhambeni kwexesha iya kwahluka.
Iithebhu zencwadi nazo zimnandi kakhulu, kulula ukuzifunda kwaye zijolise ekunikezeleni ngolwazi olufanelekileyo kumsebenzisi.
Ndikhumbula ithuba loku vota iincwadi, nkqu shiya izimvo kunye a hluza ngexabiso Kwaye basinika ithuba lokufumana iincwadana onazo simahla ngendlela elula. Kodwa ayisiyonto ibalulekileyo.
Ukuba ujonga ngasekunene, iithebhu zincediswa kukujongwa kwangaphambili kwencwadi, kunye nekhava ekumgangatho ophezulu, kunye noluhlu lwamakhonkco angaphandle endiye ndafumana isuntswana layo yonke into ukusuka kumaphepha asemthethweni, ukuphononongwa kwebhlog, okanye isithuba kwiiGoodreads. Ndikhe ndabona amakhonkco kwamanye amaqonga kwaye oku andiqondi ukuba kuya kubanceda kakhulu.
Esinye sezimanga endisithathileyo kukuba kungenzeka thumela ngokuzenzekelayo ukuthengwa kwethu (ukuba kukwifomathi ye-mobi) ngqo kuhlobo lwethu. Kule nto, kufuneka sidibanise isixhobo sethu kumanyathelo ama-2.
Makhe siye Iakhawunti yam> Izixhobo zam kwaye songeze i-imeyile yethu ehambelana nayo ukusuka kuhlobo lweAmazon. Emva koko siye ku IAmazon> Lawula Uhlobo Lwam> Useto lweXwebhu lobuqu sidibanisa @ lektu.com kwi Uluhlu lweedilesi ze-imeyile ezigunyazisiweyo zokuthumela amaxwebhu obuqu
Inketho enomdla kakhulu ukuba abapapashi mabaqwalasele 😉
Kwinqanaba eliqhelekileyo, izinto ezi-2 ziyandichaphazela:
Eyokuqala leyo unekhathalogu encinci. Yazalwa ineencwadi ezingama-200 kuphela, ndibona okuncinci kumanyathelo ezi mpawu kodwa ekuhambeni kwexesha ziya kusonjululwa.
Umzuzwana, ukunqongophala kweendaba. Ngaba iindaba zokuhlela okanye ingqokelela yekhathalogu kuphela eya kupapashwa eLektu? Valdemar, Ndicinga ukuba uzokujoyina kungekudala kuba iqinisekisiwe yi-twitter, kubonakala ngathi akanalo nofifi lokufaka iindaba zakhe. Jonga i-tweet ukusuka U-Emilio Bueso
Ngokuvakalayo nangokucacileyo: @iqosweb ayizukukhupha iindaba kwidijithali. UKUYA @lektu Iincwadi zengxowa-mali yokupapasha ziya kuhamba, hayi iindaba.
-Emilio Bueso (@e_bueso) Aprili 8, 2014
Ihlazo kubalandeli bakhe. Ukuba eLektu asiziboni iindaba, ingxowa-mali yekhathalogu kuphela, nangona iyiprojekthi enomdla, enokuthi idityaniswe ne-decaffeine, iyakuswela intlantsi ukuba ibe yimpumelelo epheleleyo.
Ukuphoxeka kwam okuncinci kuye "Ukubandakanyeka okuncinci" kukaGigamesh. Iivolumu zeMidlalo yeTrone zilungile (ezithi zihambe nge- € 6 yeyokuqala kuphela, ayizizo zonke ¬ ¬) kodwa azinazo ezinye iincwadi. Ndicinga ukuba ngumcimbi wexesha, kodwa bendilindele lukhulu kuwe xa usungulwa.
Wayeqinisekile ukuba uGigamesh uzakuba ngumdlali ophambili kule projekthi, esenza ikhathalogu kunye nevolumu yokugcwala kunye nokusebenza njengehuku kunye nokutsala abapapashi abancinci.
Siza kulandela uLektu ngokusondeleyo. Ndijonge phambili kuphuculo oluninzi kunye neendaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » software » eBooks » Sihlalutya uLektu
Molo, nangona okwangoku sithengisa kwiLektu iincwadi ezi-5 ze / Ingoma yoMkhenkce kunye noMlilo /, injongo yethu kukulayisha kungekudala / Ukuzalwa kwendoda nomfazi, kunye namanye amabali amdaka /, nguRichard Incwadi yokuqala kaLankhmar, Fafhrd kunye neGrey Mouser /, kaLeiber kunye ne-Exegesis, ka-Alejo Cuervo. Njengamaqonga eLektu, sisenokuninzi ekufuneka sikwenzile (kunye nezinto ezininzi ezimangazayo). Ukubulisa.
Kukhulu, ndiza kukulinda ngokungenamonde 🙂
Ndiyabulela kakhulu ngolwazi
Ndilithandile eli nqaku. Ndabelana ngemibono efanayo, nangona ndingakhange ndibone ukujija kukaValdemar. Kubi oko! Ngompapashi upholile.
Ewe, kuya kufuneka silinde. Ndiyakholelwa ukuba umba wekhathalogu uya kusonjululwa. Zonke zilungile kakhulu kwaye ukuba nabapapashi endibalandelayo kunye kuyaphola. Kubi ngeValdemar 🙁
U-Emilio Bueso sitsho
I-ebook (ngexabiso apho ifunwa khona kwaye xa ingengomthengisi wehlabathi) ayisayi kushiya imida yabapapashi ukuze iqinisekise ukuba ukubekwa kwemali kubandakanyeka kwisivumelwano semisebenzi kuyagutyungelwa, kungenxa yeendleko zoguqulo. ...
Le panorama ibangela ukuba ifayile ibonwe njengefomathi yexabiso eliphantsi phantse kuwo onke amanqanaba eshishini. Okwangoku zininzi iilebheli ezifumanisa ukuba zinenzuzo kuphela kwiibhalansi kunye nokupheliswa.
Ayilindelwanga ukuba zininzi izinto ezikhoyo ezikhoyo kwintengiso yedijithali. Inyani namhlanje kukuba phantse bonke abapapashi abakhulu ababheja kwi-e-ncwadi okokuqala, hayi kwikota, ngabo babotshelelwe zizibophelelo zomthetho abazifumanayo nabona barhwebi baphambili bezorhwebo.
Kwaye phantse akukho mntu uzimisele ukuhlawula ngaphezulu kwe- $ 5 ngefayile. Abafundi abaninzi bathengisiwe, ewe, kodwa loo nto ayibangeli ukuba inani labantu abathenga iifayile likhuphuke, kumacandelo amaninzi imeko ibonakala ngathi iyahamba ngenye indlela.
Kwaye uza kundixelela ukuba ungabhatala njani, nokuba kungeenyanga ezintathu okanye kwangaphambili, iindleko zetayitile enentengiso ye-5000 yabafundi abanokubakho ... ukuba umda oshiywe yifomathi ethile awukuvumeli ukuba ugubungele ukumiliselwa iindleko. Kulula kanjalo.
Phendula uEmilio Bueso
Kucacile ukuba ukwenza yonke into esiyicelayo kubafundi, iiakhawunti kufuneka ziphume. Ukuba akukho shishini, akukho mntu uza kwenza intshukumo.
Kubonakala kum ukuba ukuntywiliselwa kokuqala kwencwadi ye-e-Spain kwaqala ngonyawo oluphosakeleyo, kunye neencwadi ezikumgangatho ophantsi kakhulu, i-DRM kunye nexabiso elifanayo njengencwadi ebonakalayo kwaye kubonakala kum ukuba oku kudala ukuthandabuza kubafundi kwaye iphelile kwimeko yangoku.
I-DRM ayinyamezeleki kwaye ayinaxabiso, isohlwaya kuphela umthengi, kuba nabani na ofuna ukuqhekeza uyayisusa ngomzuzu. Ke abalungisi nto.
Kwaye leliphi ixabiso ekufuneka incwadi ye-e kufuneka ibe nalo? Okanye ngcono lithini ixabiso le-ebook onokuthi usete kuyo ixabiso? Umbuzo onzima. Kodwa kuyacaca ukuba zininzi iinkqubo zokudalwa kweencwadi eziza kwabelwana ngazo kwifomathi ebonakalayo nakwi-ebook.
Kubapapashi abancinci ndibona kulula ukufumana ukusebenza. Kwezinkulu ndiyathemba ukuba baphonononge iinkqubo kwaye banokufumana indlela yokufumana imali kwaye basinikeze umgangatho kunye namaxabiso asezantsi.
Kubonakala ngathi umda wokuchasana uku- € 5 kodwa ulungelelwaniso lwe- € 10 kuya kuba kuhle ukuqala ngalo, oko ndingaziboni kucacile ziincwadi ze- euros nge-15 nakwi- € 20.
Ukuba ungafunda incwadi ye-ebook ngeentsuku ezili-14, i-ebook isimahla
Ngubani obekek 'ityala ngokufunda kancinane nangaphantsi?